Korintofo I 9 NA-TWI - Ɔsomafo dwumadi - Menne me ho anaa? - Bible Gateway
Korintofo I 8Korintofo I 10
Korintofo I 9 Nkwa Asem (NA-TWI)
9 Menne me ho anaa? Menyɛ ɔsomafo anaa? Minhuu Yesu yɛn Awurade anaa? Na monyɛ me nsa ano adwuma wɔ Awurade mu anaa? 2 Na sɛ afoforo mpo nnye me ntom sɛ ɔsomafo a, mo de, mugye me tom saa. Sɛnea mo ankasa mo abrabɔ te wɔ Awurade mu no di ho adanse sɛ meyɛ ɔsomafo. 3 Sɛ nnipa ka me ho asɛm a, saa kwan yi so na mefa yi me ho ano.